Computer အစ ~ IT SuBoo
5/27/2013 နည်းပညာများ, သုတ No comments
ကွန်ပျူတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး တစ်ခုလောက်သိချင်လို့.. Link လေးဖြစ်ဖြစ်ပေးနိုင်မလားလို့ ပါ။
ကွန်ပျူတာရဲ့ အစ၊ ဘယ်လိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သလဲ၊ ဘာကြောင့် ကွန်ပျူတာလို့ ခေါ်သလဲ၊ ဘယ်သူက ဘယ်နှခုနှစ်မှာ စတင်တီထွင်ခဲ့တာလဲ အစရှိသဖြင့် ကွန်ပျူတာရဲ့ သမိုင်းလေးကို သိချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်..... ဒါလေးလည်းသိထားသင့်တာမို့ အများဗဟုသုတရအောင် တဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်....:)
ကွန်ပျူတာ The NASA Columbia Supercomputer.
ကွန်ပျူတာ သည် အချက်အလက်data များကို တွက်ချက်ရန် ညွှန်ကြားချက် အစဉ်များ အတိုင်း အလုပ်လုပ်ပေးသော စက် ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာ နှင့် ဆင်သော စက်ကိရိယာများစွာ ရှိခဲ့သော်လည်း ပထမဆုံး ယခုခေတ် ကွန်ပျူတာ နှင့် တူသော စက်ကို ၂၀ ရာစု နှစ်လယ် (၁၉၄၀ - ၁၉၄၅) တွင် တွေ့ရသည်။ အဦးပိုင်း လျှပ်စစ် ကွန်ပျူတာ များ၏ အရွယ်မှာ အခန်းကြီးကြီး တစ်ခုနှင့် အပြည့်ရှိပြီး ယခုခေတ် ကွန်ပျူတာများ အလုံးရာပေါင်း များစွာ သုံးသော လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ကိုသုံးသည်။ ခေတ်ပေါ် ကွန်ပျူတာများသည် အလွန်သေးငယ်သော အိုင်စီ (integrated circuit) များကို အခြေခံတည်ဆောက် ထားပြီး နေရာ အနည်းငယ်သာယူ၍ အဆပေါင်း သန်း မှ ကုဋ္ဋေ များစွာအထိ ပိုမိုမြန်သည်။ ယခုခေတ်တွင် ကွန်ပျူတာကို လက်ပတ်နာရီ အတွင်းဝင်အောင် လုပ်နိုင်ပြီး လက်ပတ်နာရီ ဓာတ်ခဲ ဖြင့်ပင် အားယူ သုံးစွဲနိုင်သည်။ တစ်ယောက်သုံး ကွန်ပျူတာ များသည် သတင်းခေတ်၏ ရုပ်ပြ များ ဖြစ်ပြီး ၄င်းကို လူအများသုံး ကွန်ပျူတာ ဟု ထင်နေသော်လည်း တကယ်တမ်း အသုံးအများဆုံး ကွန်ပျူတာ ပုံစံမှာ အသေပိတ် ကွန်ပျူတာ (embedded computer) ဖြစ်သည်။
ညွှန်ကြားချက်များကို သိမ်းဆည်း လုပ်ဆောင် ခြင်းကို ပရိုဂရမ် ဟုခေါ်ပြီး အမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်သော ကွန်ပျူတာကို ဂဏန်းတွက်စက် ဖြင့် ခွဲခြားခေါ်သည်။ Church–Turing thesis သည် အမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် သဘောကို သင်္ချာ နည်းဖြင့် ဖော်ပြပြီး ကွန်ပျူတာ တစ်ခုတွင် အနည်းဆုံး အရည်အချင်းမှာ အခြား ကွန်ပျူတာ တစ်ခု လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာ တစ်ခု၏ လုပ်ဆောင်နိုင်သော အရည်အချင်းမှာ ရှုပ်ထွေးသော စူပါ ကွန်ပျူတာ မှ ပီဒီအေ (personal digital assistant) အထိ ကွဲပြားသော်လည်း လုံလောက်သော အချိန်နှင့် သိုလှောင်နိုင်မှု ပေးလျှင် အတူတူ ပင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
1 ကွန်ပျူတာ သမိုင်း
2 ကွန်ပျူတာ အလုပ်လုပ်ပုံ
2.1 ထိန်းချူပ် ဌာန
2.2 ဂဏန်း သင်္ချာ နှင့် လော့ဂျစ် ဌာန
2.3 မှတ်ဥာဏ်(Memory Device)
2.4 အသွင်း အထုတ် ကိရိယာများ
3 အခြား အကြောင်းအရာများ
3.3 How computers work
Jacquard loom ပထမဆုံး programmable device လို့ဆိုလို့ရပါတယ်. Main article: ကွန်ပျူတာ သမိုင်း ရှေးယခင်က ကွန်ပျူတာ ကို သတ်မှတ်ဖို့ ရန်အလွန်တရာမှခက်ခဲ ခဲ့ သည်။ယခုအချိန်တွင်မူကွန်ပျူတာကို အမည်အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်မူကိရိယာများ (Devices) တော်တော်များများကို ကွန်ပျူတာ တပ်ပြီးခေါ်နေကြပြီဖြစ်သည်။အစောဆုံး ကွန်ပျူတာ သည် တွက်ချက်မှုပိုင်းကို ပေသီး(Abacus)များမှ စခဲ့သည်။ ပေသီး(Abacus)သည် ပထမဆုံးဂဏန်းပေါင်းစက် ပင်ဖြစ်သည်။ ပေသီးကို တရုတ်ပြည်တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Main article: စီပီယူ ဗဟိုထိန်းချူပ် ဌာန (control unit, often calledacontrol system or CPU) သို့မဟုတ် စီပီယူ သည် ကွန်ပျူတာ၏ အစိတ်အပိုင်း မျိုးစုံကို လမ်းဆောင်သည်။ ၄င်းသည် ပရိုဂရမ် ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို တစ်ကြောင်းခြင်း ဖတ်ရှူ ပြီး အဓိပ္ပါယ် ပြန်သည်။ ထိန်းချူပ် ဌာနသည် အဆင့်မြင့်သော ကွန်ပျူတာများတွင် ၄င်းညွှန်ကြားချက် အစဉ်များကို မြန်ဆန်စေရန်အတွက် ခုန်ကျော် ဖတ်ရှူ ခြင်း လုပ်လေ့ရှိသည်။
MIPS architecture ၏ ညွှန်ကြားချက် ကို ထိန်းချူပ် ဌာနမှ ဖတ်ရှူပုံ ဖော်ပြသော ပုံကြမ်း ထိန်းချူပ် ဌာန၏ အလုပ်များမှာ နောက် စီပီယူများတွင် ကွာခြားနိုင်သော်လည်း အခြေခံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Main articles: Arithmetic logic unit and အေယ်လ်ယူ ဂဏန်း သင်္ချာ နှင့် လော့ဂျစ် အစိတ်အပိုင်း (Arithmetic and logic unit, ALU) ခေါ် အေယ်လ်ယူ သည် ဂဏန်း သင်္ချာ နှင့် လော့ဂျစ် ဆောင်ရွက်မှု အပိုင်း နှစ်ခု ကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ဂဏန်း သင်္ချာ လုပ်ဆောင်မှုတွင် ALU သည် အခြေခံများဖြစ်သည့် အပေါင်း၊ အနုတ်၊ အမြှောက်၊ အစား၊ တြီဂိုနိုမေတြီ ဖန်ရှင်များ နှင့် square root တို့ လုပ်ဆောင်သည်။ အချိုသော လုပ်ဆောင်မှု များမှာ ကိန်းပြည့်များတိုတာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အချိုမှာ တိကျမှု ရော့ကျနိုင်သော်လည်း ဒဿမ ကိန်း (floating point) မှ ကိန်းစစ် (real number) များအထိ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ မည်သည့် ကွန်ပျူတာမဆို မည်မျှပင် ခက်ခဲသော အလုပ်ဖြစ်ပါစေ တစ်ဆင့်ခြင်း လွယ်ကူသော အဆင့်များအဖြစ် ပြောင်းလည်းစေခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့် ကွန်ပျူတာမဆို ဘယ်လို ဂဏန်းသင်္ချာပြဿနာမဆို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ၄င်း၏ အေယ်လ်ယူ က တိုက်ရိုက် ဖြေရှင်၍မရပါက သွယ်ဝိုက်သော်နည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
အေယ်လ်ယူသည် ဂဏန်းများကို နှိုင်းရှင်ပြီး အဖြေကို လော့ဂျစ်များဖြစ်သည့် မှားမှန် တန်ဖိုး အဖြစ်လည်း အဖြေထုတ်နိုင်သည်။ လော့ဂျစ် လုပ်ဆောင်မှုများမှာ AND၊ OR၊ XOR နှင့် NOT တို့ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့သည် ခတ်ခဲသော် စဉ်းစား စဉ်ချင်မှုများ နှင့် လော့ဂျစ် လုပ်ဆောင်မှုများ အတွက် အသုံးဝင်သည်။
စူပါ ကွန်ပျူတာများသည် အေယ်လ်ယူ များစွာပါပြီး တစ်ပြိုင်နက်တည်း များစွာသော ညွှန်ကြားချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာတွင် SIMD နှင့် MIMD များပါလျှင် ဂျီပီယူ ခေါ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများတွင် အေယ်လ်ယူက ဗက်တာ နှင့် မတ်ထရစ် တို့အတွက် ဂဏန်းသင်္ချာနည်းအဖြစ် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးသည်။
Main article: ကွန်ပျူတာ မှတ်ဉာဏ် သံလိုက် ချက်မ မီမိုရီ မှာ ၁၉၆၀ များအထိ တစ်ချိန်က ကျော်ကြားခဲ့သော အဓီက ကွန်ပျူတာ မှတ်ဥာဏ်(Memory Device) ဖြစ်ပြီး ယခုခေတ်တွင် ဆီမီးကွန်ဓာတ်တာ မှတ်ဥာဏ် အဖြစ် ပြောင်းသုံးသည် ကွန်ပျူတာ မှတ်ဥာဏ် တစ်ခုကို ဂဏန်းများ ပို့သွင်း သို့မဟုတ် ဖတ်ရှူနိုင်သည် အခန်းငယ် အတန်းများ အဖြစ် မြင်နိုင်သည်။ အခန်းတိုင်းတွင် လိပ်စာ (address) တစ်ခု ရှိပြီး ဂဏန်းတစ်လုံးသာ မှတ်ယူနိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာကို အခန်းနံပါတ် ၁၃၅၇ တွင် ဂဏန်း ၁၂၃ ရေးပါဟု၎င်း၊ အခန်းနံပါတ် ၁၃၅၇ မှဂဏန်းကို အခန်းနံပါတ် ၂၄၅၆ မှဂဏန်း ဖြင့်ပေါင်း၍ အခန်းနံပါတ် ၁၅၉၅ သို့ ရေးပါဟု၎င်း ညှန်းကြားနိုင်သည်။ ၄င်းဂဏန်းမှာ လက်တွေ့အားဖြင့် မည်သည့်ကိုမဆှိုရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ ဂဏန်းနံပါတ်များသာမက ကွန်ပျူတာ ညွှန်ကြားချက် များပင် ဂဏန်း အဖြစ် အလွယ်တစ်ကူ မှတ်ယူနိုင်သည်။ စီပီယူ အနေဖြင့် ၄င်းဂဏန်းမှာ မည်သည့် အကြောင်းဖြစ်သည်ဟု မခွဲခြားသောကြောင့် ပရိုဂရမ်ရေးသူ အနေဖြင့် မှတ်ဥာဏ် ကို ဂဏန်းအဖြစ်ထားပြီး စွယ်စုံ သုံးနိုင်သည်။
ခေတ်ပေါ် ကွန်ပျုတာ အားလုံးနီးပါးသည်မှတ်ဥာဏ်အခန်းများ၏ ရှစ်ခုပါ ဘစ် (bit) များကို ဘိုက် (byte) ခေါ် အစုအဖြစ် ထားရှိသိမ်းပေးသည်။ ဘိုက် တစ်ခုသည် ၀မှ ၂၅၅ အထိ၎င်း သို့မဟုတ် -၁၂၈ မှ +၁၂၇ အထိ၎င်း ၂၅၆ မျိုး မှတ်ယူနိူင်သည်။ ပို၍ကြီးသော ဂဏန်းများ ကိုမှတ်ယူရန် နောက် ဘိုက် တစ်ခု ထပ်ယူနိူင်သည်။ များသောအားဖြင့် ၂ ခု၊ ၄ ခု သို့မဟုတ် ၈ ခု တို့ဖြစ်ကြသည်။ အနူတ် ဂဏန်းများကို မှတ်ယူရန် Two's complement သင်္ကေတ ကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ကွန်ပျုတာ တစ်ခုသည် မည်သည့် အကြောင်းအရာမဆို ကိန်း ဖြစ်သာဖေါ်ပြ၍ရပါက သိမ်းပေးထားနိူင်သည်။ ခတ်ပေါ် ကွန်ပျုတာများသည် မီမိုရီ ဘိုက်ပေါင်း ဘီလီရမ် သို့မဟုတ် ထရီလီရမ် အထိပင် ရှိကြသည်။
CPUတွင် အထူးပြုလုပ်ထားသော ပင်မ မီမိုရီထက် များစွာ လျှင်မြန်စွာ ရေးဖတ်နိူင်သော ရီဂျစ်စတာ မီမိုရီ ပါရှိသည်။ များသောအားဖြင့် စီပီယူ အမျိုးအစားပေါ် မှုတည်၍ ရီဂျစ်စတာ မီမိုရီပေါင်း တစ်ရာမှ နှစ်ရာ အထိ ပါရှိသည်။ ရီဂျစ်စတာ မီမိုရီကို မကြာခဏ အသုံးပြုသော ဒေတာ များကို ပင်မ မီမိုရီ သုံးရန်မလိုပဲ ဖတ်ရှုရန် သုံးသည်။
ကွန်ပျုတာ memory တွင် အဓိက နှစ်မျိုးတို့မှာ random access memory ခေါ် RAM နှင့် read-only memory ခေါ် ROM တို့ ဖြစ်ကြသည်။ RAM ကို စီပီယူ အနေဖြင့် လိုအပ်သလို ရေးနိူင်ဖတ်နိူင်သော်လည်း ROM သည် အပြီးရေးသွင်းထားပြီး စီပီယူ အနေဖြင့် မရေးသားနိူင်ပဲ ဖတ်ရုံသာ ဖတ်နိူင်သည်။ များသောအားဖြင့် RAM ရှိ မှတ်သားထားသည်များကို ကွန်ပျုတာပိတ်သည်နှင့် ပျက်သွားသည်။ ROM ရှိ မှတ်သားထားသည်များမှာ ဆက်လက်ကျန်ရှိသည်။ ကွန်ပျုတာတွင် ROM သည် BIOS ခေါ် အထူး ပရိုဂရမ် မှ စက်မောင်းစနစ် ကို hard disk drive မှ RAM ပေါ်သို့ တင်ရန် ကွန်ပျုတာ ဖွံ့တိုင်း သုံးသည်။
အသွင်း အထုတ် ကိရိယာများ
I/O ခေါ် အသွင်း အထုတ် ကိရိယာများ သည် ပြင်ပ အရာများနှင့် ကွန်ပျူတာ တို့ သတင်း အချက်အလက် အပြန်အလှန် သယ်ယူရာ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာ၏ အသွင်း အထုတ် ပြုရာ ကိရိယာ ကို peripheral ဟု ခေါ်သည်။ တစ်ယောက်သုံး ကွန်ပျူတာ တစ်ခုတွင် အသွင်း ကိရိယာများ ဖြစ်သော ကီးဘုတ်၊ မောက်စ် နှင့် အထုတ် ကိရိယာများ ဖြစ်သော မော်နီတာ၊ ပရင်တာ တို့ ထုံးစံအားဖြင့် ပါသည်။
Computer ရဲ့ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများသည် Computer Hardware များဖြစ်သည်။ သ်ို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတွေကို အနုစိတ် ဖန်တီးပြီးတော့ Micro Chip Integrated Circuit တွေအဖြစ် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းအလုပ်လုပ်စေတဲ့ (I/O Device) တွေကို Hardware ဟုခေါ်ဆိုသည်။
အပျော့ထည်များ Computer Hardware များကိုအလုပ် ခိုင်းစေနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ဖန်တီးထားသော ညွှန်ကြားချက်များ (Instructions) အမိန့်များ (Commands) သည် Computer Software များဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာတစ်ခုပြရလျှင် စီဒီချပ်သည် အမာထည်(Hardware) ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းစီဒီထဲရှိ သီချင်းများ၊ ရုပ်ရှင်များသည် အပျော့ထည်(Software) များဖြစ်ကြသည်။
Firmware Hardware, Software
Firmware သည် ပထမဦးစွာ Hardware များကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပြီး Software များကအလုပ်စေခိုင်းစေနိုင်ရန် ကြားခံ ဆောင်ရွက်ပေးသော ညွှန်ကြားချက်များ (Instructions) ဖြစ်သည်။ Firmware သည် Hardware နှင့် Software ကြားမှ Interface တစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့် ကွန်ပျူတာမှာ the arithmetic and logic unit (ALU), the control unit, the memory, and the input and output devices (collectively termed I/O) ဆိုပြီး အပိုင်းလေးပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီ အပိုင်းများကိုတော့ wire များကိုစုစည်းပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ Buses များနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။
စူပါ ကွန်ပျူတာ (Supercomputer) သည် စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အထူးသဖြင့် မြန်ဆန်ရာတွင်ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိသော ကွန်ပျူတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စူပါ ကွန်ပျူတာ ကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်များမှစ၍ Control Data Corporation (CDC) မှ Seymour Cray ကစတင် တီထွင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် စတင် ရောင်းချသည်။ ထိုနောက် Cray Research ဟု ကိုယ်ပိုင် company ထောင်ခဲ့သည်။ သူသည် စူပါ ကွန်ပျူတာ ဈေးကွက်တွင် သူ၏ သစ်ဆန်းသော ဒီဇိုင်းများဖြင့် ငါးနှစ်ကြာ (၁၉၈၅ - ၁၉၉၀) စိုးမိုးခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ များတွင် မီနီ ကွန်ပျုတာများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူ ပြိုင်ဖတ် ကုမ္ပဏီငယ်လေးများ ပါဝင်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၉၀ အလယ်လောက် "စူပါ ကွန်ပျုတာ ဈေးကွက်ပျက်ခြင်း" တွင် ၎င်း ကုမ္ပဏီများ ပျောက်သွားသည်။
ယခုအခါတွင် စူပါ ကွန်ပျူတာ များမှာ ၎င်းပျက်သွားသော ကုမ္ပဏီများကို ဝယ်ယူကာ Cray, IBM, Hewlett-Packard company များမှ ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်းပြောင်းယူကာ ထုတ်လုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Los Alamos National Laboratory ရှိ IBM Roadrunner သည် ယခုတွင် အမြန်ဆုံး စူပါ ကွန်ပျုတာဖြစ်သည်။
Related Posts: နည်းပညာများ, သုတ
Shutdown တွဲသုံးတဲ့ command တွေကို ပြောကြည့်မယ်
App Back up and restore apk
Cmd Dos Command နည်းနည်းပါ
XnSketch Pro 1.13.5
Effect အလန်းတွေနှင့် Camera2v1.0.0 APK
အပိုင်းကိန်းများကို အပိုင်းကိန်းအလိုက် တွက်လို့ရမယ...
နားကြပ်တတ်လိုက်ရင် အသံမြည်ပြီး အလန်းစားHeadphone ပ...
ဖုန်းရဲ့မူရင်း Dialer လေးကိုငြီးငွေ့နေသူတွေအတွက် အ...
ဖုန်းထဲမှာ FM ဖမ်းယူနားဆင်လိုသူတွေအတွက် Spirit FM ...
ဖုန်းထဲမှာ အပျင်းပြေ ဖဲကစားမယ် Spider Solitaire 2....
Samsung မိုဘိုင်းဖုန်း user များအတွက် အသုံးဝင်မယ့်...
Nokia ဖုန်းအတွက် အသုံးဝင် လျှို့ ဝှက် ကုဒ်နံပါတ်မျ...
Android Universal Code
Health Suboo V 1.0
Folder hide (no need install)
Google Drive 1.2.182.25
ဖုန်းထဲမှာ ဒိုင်ယာရီရေးလို့ရမယ့် Private DIARY 5.9...
TTPod Player with skin
Weather SuBoo Offline apk
S3/S4 တို့မှာလို scree က မျက်နှာကိုမှတ်သားပြီး scr...
အမှိုက်တွေရှင်းပေးမယ့် 1Tap Cleaner Pro 2.10
Chess ၀ါသနာရှင်များအတွက် နောက်ဆုံးထွက် Chess Maste...
Falcon Pro (for Twitter) 1.9a
Bass Booster Pro 2.1
Facebook မှာ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေ ဒေါင်းမရဘူးဆိုသူတွေအ...
Android မှာ ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းနှင့်ကြည့်နိုင်မယ်...
လာပါပြီ Zaypa ထက်မြန်တဲ့ SuperBeam | WiFi Direct S...
SD-Booster 2.0.2 apk
Seen - Video calls for Facebook
Nova Launcher 2.1beta3
First Aid ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း apk